5 Haịram+ bụ́ eze Taya+ wee zigara Sọlọmọn ndị na-ejere ya ozi,+ n’ihi na ọ nụrụ na ọ bụ ya ka ha tere mmanụ ịbụ eze n’ọnọdụ nna ya; n’ihi na Haịram hụrụ Devid n’anya mgbe niile.+ 2 Sọlọmọn wee zie Haịram, sị:+ 3 “Gị onwe gị maara nke ọma na Devid nna m enweghị ike iwuru aha Jehova bụ́ Chineke ya ụlọ n’ihi agha+ ha ji gbaa ya gburugburu, ruo mgbe Jehova mere ka ha nọrọ n’okpuru ọbụ ụkwụ ya. 4 Ma ugbu a, Jehova bụ́ Chineke m enyewo m ezumike gbaa gburugburu.+ Ọ dịghị onye nguzogide nọnụ, ọ dịghịkwa ihe ọjọọ na-emenụ.+ 5 Lee, m na-eche echiche iwuru aha Jehova bụ́ Chineke m ụlọ,+ dị nnọọ ka Jehova kwere Devid nna m ná nkwa, sị, ‘Ọ bụ nwa gị nke m ga-eme ka ọ nọkwasị n’ocheeze gị n’ọnọdụ gị ga-ewuru aha m ụlọ.’+ 6 Ugbu a, nye iwu ka ha gbutere m osisi sida na Lebanọn;+ ndị na-ejere m ozi ga-esonyere ndị na-ejere gị ozi, m ga-enyekwa gị ụgwọ ọrụ nke ndị na-ejere gị ozi dị ka ihe niile ị ga-ekwu si dị, n’ihi na gị onwe gị maara nke ọma na ọ dịghị onye n’ime anyị maara otú e si egbutu osisi dị ka ndị Saịdọn.”+ 7 O wee ruo na ozugbo Haịram+ nụrụ okwu Sọlọmọn, ọ malitere ịṅụrị ọṅụ nke ukwuu, o wee sị: “Onye a gọziri agọzi+ ka Jehova bụ taa n’ihi na o nyewo Devid nwa maara ihe+ ịchị ndị a dị ọtụtụ!”+ 8 Ya mere, Haịram zigaara Sọlọmọn ozi, sị: “Anụwo m ihe i ziri m. Mụ onwe m ga-eme ihe niile ị chọrọ n’ihe metụtara osisi sida na osisi junipa.+ 9 Ndị na-ejere m ozi ga-esi na Lebanọn+ budata ha n’oké osimiri; mụ onwe m ga-ekekọta ha ọnụ ka ha see n’oké osimiri ruo n’ebe ị ga-agwa m;+ m ga-atọsakwa ha n’ebe ahụ, gị onwe gị kwa ga-eburu ha; ị ga-emekwa ihe m chọrọ site n’inye m ihe ezinụlọ m ga-eri.”+ 10 Haịram wee na-ebunye Sọlọmọn osisi sida na osisi junipa dị ka ihe niile ọ chọrọ si dị. 11 Sọlọmọn n’onwe ya bunyere Haịram puku ihe ọ̀tụ̀tụ̀ kọọ+ ọka wit iri abụọ dị ka ihe oriri maka ezinụlọ ya na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ kọọ iri abụọ nke mmanụ a sụpụtara+ ná mkpụrụ oliv. Nke ahụ bụ ihe Sọlọmọn na-ebunye Haịram site n’afọ ruo n’afọ.+ 12 Jehova nyere Sọlọmọn amamihe, dị nnọọ ka o kwere ya ná nkwa;+ udo wee dị n’etiti Haịram na Sọlọmọn, ha abụọ wee gbaa ndụ. 13 Eze Sọlọmọn wee si n’Izrel dum na-akpọta ndị a kpọọrọ ịrụ ọrụ mmanye; ndị a kpọọrọ ịrụ ọrụ mmanye+ dị puku ndị ikom iri atọ. 14 Ọ na-ezigakwa ha Lebanọn puku mmadụ iri puku mmadụ iri, ha na-agbanwe ibe ha kwa ọnwa. Ha na-anọ na Lebanọn ruo otu ọnwa, nọọ ọnwa abụọ n’ụlọ ha;+ Adọnaịram+ bụkwa onyeisi ndị a kpọọrọ+ ịrụ ọrụ mmanye.+ 15 Sọlọmọn wee nwee+ puku mmadụ iri asaa ndị na-ebu ibu+ nakwa puku mmadụ iri asatọ ndị na-awa nkume+ n’ugwu,+ 16 ma e wezụga ndị isi na-anọchite anya+ Sọlọmọn, bụ́ ndị na-elekọta ọrụ ya, bụ́ ndị isi ọrụ+ dị puku atọ na narị atọ, ndị na-ahụ maka ndị na-arụ ọrụ. 17 Eze wee nye iwu ka ha na-awapụta nnukwute nkume ndị dị oké ọnụ,+ iji jiri nkume a wapụtara awapụta+ tọọ ntọala ụlọ ahụ.+ 18 Ya mere, ndị na-ewuru Sọlọmọn ụlọ na ndị na-ewuru Haịram ụlọ na ndị Gibal+ wara ha, ha nọkwa na-akwadebe osisi na nkume ndị ahụ iji wuo ụlọ ahụ.